Ciyaaraha | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha
HORDHAC: Villarreal Vs Real Madrid iyo xaqiiqooyinka kulanka.
Kooxda Real Madrid ayaa marti u noqon doonta kooxda Villarreal kulankii ugu dambeeyay ee horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedka 2017/2018. Kooxda Zinedine Zidane ayaa 6/0 ku xasuuqay kooxda Celta Vigo todobaadkii hore inkasta oo uu cristaino Ronaldo dhaawac ku seegay kulankaas. Kadib markii Barcelona laga badiyay Real ayaa haatan 15 dhibcood ka dambaysa kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan ...
HORDHAC: Chelsea Vs Man United iyo wax walba oo aad uga baahantahay kulankan.
Kooxaha Man United iyo chelsea ayaa isaga hor iman doona kulankoodii ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedkooda iyaga oo garoonka wembley ku ciyaari doona finalka FA Cup-ka. Labada kooxood ayaa kulanka soo galaya iyaga oo si aad ah u doonya in ay ku guulaystaan koobka si ay xilli ciyaareedkooda ugu badbaadiyaan. Chelsea ayaa iyagu so galaya kulanka markii 2-aad oo xiriir ...
Jose Mourinho oo isha ku haya daafac ka ciyaara Sera-da.
Tababaraha Kooxda Man United ee Jose Mourinho ayaa isku dayi doona in uu Man United keeno kabtanka kooxda Ac Milan ee Leonardo Bonucci sida laga soo xigtay Tuttosport. Sida uu wargaysku sheegay Jose ayaa doonaya in uu Bonucci ku xoojiyo daafaciisa dambe xilli ciyaareedka dambe. Daafacan dhexe oo 31 jirsan doona 31 bishan ayaa Ac Milan ku qaatay sanad adag ...
Luis Suarez oo loga gacan haatiyay horyaalka taliyaaniga.
Wararka ka imanaya dalka Spain ayaa sheegaya in ay koox reer Italy ay wadahadalo la furtay kooxda Barcelona kaas oo ay kaga doonayso weeraryahanka reer Uruguay ee Luis Suarez sida ay sheegayaan wararku. Waxa maalmihii ugu dambeeyay soo baxaya warar sheegaya in uu Luis Suarez isaga tagi doono kooxda Barcelona maadama ay ku sii dhawaanayso in ay kooxdu la soo ...
Mario Balotelli Oo ku dhaw inuu ku biro Kooxda Marseille.
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Nice ee Mario Balotelli ayaa heshiis shaqsi ah la gaaray Olympique Marseille, iyadoo Roma iyo Fiorentina ayna ogolaan dalabaadkiisa. Sida laga soo xigtay Tuttomercatoweb, weeraryahanka kooxda Nice ayaa doorbidaya inuu baaqi ku sii ahaado Ligue 1 ka dib labo sanno oo aad u fiican oo uu ku qaatay France. Xiddigan ayaa soo bandhigay qaab ciyaareedkiisii ...
Stephan Lichtsteiner Oo Qarka U Saaran In Uu Ku Biiro Kooxd ka dhisan jarmalka.
Daafaca Juventus Stephan Lichtsteiner ayaa lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu qandaraas laba sano ah u saxiixo Borussia Dortmund. Daafaca buuxa ayaa todoba xilli ciyaareed ku qaatay Bianconeri, isagoo ku guuleystay Scudetto sannad kasta, waxaana sidoo kale afar jeer qaaday Copa Italia. Xilli ciyaareedkan xiddiga heerka caalami ee dalka Switzerland ayaa saftay 26 kulan oo Serie A ...